Janaayo | 2012 | WEEJIDOW
Madaweyne Shariif oo golaha amaanka ee QM ka dalbaday in Somalia laga qaado xayiraada hubka ee saaran 20-ka sano
Janaayo 31, 2012
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa khudbad dheer ka jeediyay shirkii madaxda Afrikaanka ugu soo gabagaboobay shalay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay tahay mid weli cakiran, loona baahanyahay in taagero dhan kasta ah lala soo gaaro dalka Soomaaliya si uu aakhirka ugu guuleysto inuu lgu hiisa isku taago.
Madaxweyne Shariif waxa uu ugu baaqay Midowga Afrika inay kaalin mug leh ka qaataan nabad soo celinta Soomaaliya, waxaana uu ka dalbaday inay ciidamo dheeraad ah u soo diraan Soomaaliya, isla markaasna dalalkii banqaaday inay ciidamo keenayaan Soomaaliya ay soo dedejiyaan.
War deg deg ah: dagaalkii degaanka Jaziira, Al-Shabaab oo maanta dhowr saacadood heyste Jaziira.
Saakadii hore ayee aheyd markii Xoogaga Al-Shabaab ey weerar culus kusoo qaadeen duleedka Degmada wadajir gaar ahaan deegaanka loo yaqaan jaziira oo ah deegaan deex, isla markaana loogu bartay wax soo saarka Milixda, halkaasi oo dagaal culus uu ka dhacay.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa weerarka ku soo qaaday fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen Ciidamada gaarka ah ee ka howlgala degmada Wadajir, taasi oo dhalisay in labada dhinac uu dagaal culus halkaasi ku dhex maro.
Dagaalka oo ahaa mid ladaba dhinac ay isku adeegsadeen Hubka Nuucyadiisa kala gedisan, ayaa waxaa suura gashay in Ciidamada Al-Shabaab ee halkaasi weerarka kusoo qaaday la wareegaan deegaankaasi isla markaana muddo ay ku sugnaadaan.
Ciidamada Al-Shabaab ayaa dhufeesyo ka sameestay daaro dhaa dheer iyo dalcado halkaasi ku yaala, iyagoona qoryaha BKM-ka loo yaqaan iyo Madaafiicda garbaha laga tuura halkaasi la koray, taasi oo sahli weysay in Ciidamada Maamulka degmada wadajir ay u babac dhigaan Maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday.
Cutubyo ka tirsan Millitariga Dowlada KMG ee Soomaaliya, isla markaana ay hor kacayeen Abaanduulaha Ciidanka Xooga Gen. dhaga-badan iyo Gen. Gacma dulle, ayaa dagaalkaasi ku biiray iyadoo sidoo kale la sheegay in dagaalka ay ku biireen Ciidamo ka tirsan kuwa Brundi oo fariisin ku leh meel aan sidaa ugu dheereen deegaanka Jaziira.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa ka baxay goobihii ay qabsadeen, iyagoona dib u gurtay ka dib markii dagaal culus ay kala kulmeen huwanta is baheysaneesa, iyadoona warar saacadihii ugu danbeeyay nasoo gaaraya ay sheegayaan in dagaalka la iskala tagay deegaanka jaziira, isla markaana rasaasta la isla tagay deegaanka Baqal ee dhinaca koonfur galbeed ka sii xigta deegaanka Jaziira.
Saraakiisha labada dhinac kala hogaamineesa ayaa sheegey in ilaa 8 Sideed) oo ka tirsan labada dhinac ay ku dhinteen isla markaasna ay 10 (toban) ku dhaawacmeen.
War deg deg ah: Al-Shabaab oo Saaka Waaberigii Soo Weeraray Xeebta Jasiira ee Magaalada Muqdisho
Xarakada Al-Shabaab ayaa saaka waaberigii weerar ku soo qaaday fariisimo ciidamada DKMG iyo AMISOM ku leeyihiin duleedka xeebta Jasiira ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada DKMG iyo kuwa AMISOM ayaa iska caabin kala hortegey weerarka jarmaadka ah ee Al-Shabaab ay soo qaadeen, sida ay xaqiijiyeen dad degaan xaafado u dhow deegaankaasi.
Dagaalka ayaa socday qadar saacad ka badan, waxaana aroornimadii hore la maqlayey hubka culus.
Warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee jooga Muqdisho iyo kuwa dawlada, waxayna warbaahntaasi sheegtay in weerarkaasi uu sababay khasaare soo gaaray AMISOM iyo ciidamada DKMG ah.
Ma jiraan wax saraakiil oo dhanka dawlada iyo AMISOM uga hadashay weerarka saaka.
Wararka deegaanka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xaalada ay haatan degan tahay, isla markaana uusan jirin wax khasaare ah oo dad rayid ah ka soo gaarey dagaalka.
DAAWO: SIDII AY GABDHIHII SOOMAALIYEED U HALAABEEN
War Deg Deg Ah Ciidamadii ugu Badnaa oo Itoobiyaan ah oo wata Gaadiidka Dagaal iyo Taangiyo oo u dhaqaaqay Gobolka Bay maanta
Wararka naga soo gaarayo Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Degmadaasi ka dhaqaaqeen Ciidamadii ugu badnaa oo Itoobiyaan iyo kuwo DIGIL & MIRIFLE ah oo gaaraya 8000 kuwaa oo ku hubeesan gaadiidka Dagaalka iyo tiro Taangiyo ah.
Ciidamada DIGIL & MIRIFLE iyo kuwa Soomaalida kale oo la socda Itoobiyaanka ayaa hogaaminaya Gen. Maadeey ali Jiroomow iyo Kiish Buur oo labadaba ka tirsan DFKMG Soomaaliya.
Ciidamadan tirada badan ALLAHA shacabka ha ka badbaadiyo ayaa la soo sheegaya in ay afka saareen ama u dhaqaaqeen Gobolka Bay kaas ay inta badan maamulaan Xarakada Al-Shabaab.
Ciidamadan ayaa la sheegay in waayadaan danbe ee ku jireen Diyaar garow Dagaal markaan u soo ruqaansadeen sidii Gobolka Bay u weerari lahaayeen iyadoona dadkii arkay soo sheegayaan in Ciidamadan ee ka muuqato Diyaar garow dagaal kii ugu danbeeyay.
”Waxaan aragany Ciidamo badan aan tirin weynay iyo Gawaari Dagaal iyo Taangiyo faraha ka batay kuwaa oo noo sii dhaafay dhinaca iyo Gbolka Bay iyo Bakool ”ayuu yiri qof goob jooge ah oo Warbaahinta la hadlay.
Saraakiil sar sare oo Shabaab ka tirsan ayaa geeskooda sheegay in ay ka warhayaan Dhaq dhaqaaqa iyo Duulaanka Ciidamada Itoobiya eena doonayaan in ee ka hortagaan oo iska difaacaan.
Ciidamadan Hada ku wajahan Gobolka Bay ayaa la sheegay in ee qeyb ka yihiin Ciidamo DIGIL & MIRIFLE badan oo Dhawaan qeybo kamid ah Gobolka Gedo kusoo bandhigay Dhoolo tusyo Miltari ee ku muujinayeen awoodooda Milatari.
Dhawaan ayey aheed marki uu Shaaciyay Wasiirka Arimaha Dibada e Dalka Itoobiya Heyle Maryam in diirada u saaran tahay ciidankooda eena weerari doonaan Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay si Al-Shabaab uga saaraan.
Waxaana hada Dhaq dhaqaaqan Ciidamada Itoobiya bilaabeen Cabsi badan ku abuurtay dadka ku dhaqan Gobolada Bay Bakool iyo Gedo kuwaa oo ka cabsi qaba in Dagaalo Culus Goboladaasi ku dhaxmaraan Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Xarakada Al-Shabaab.
War deg deg ah: Xildhibaano Taageersanaa Shariif Xasan oo kasoo goostay ku biiray Garabka Madoobe Nuunow Maxamad
Waxaa Maanta Garabka uu Hogaamiyo Baarlamanaka Soomaaliya Madoobe Nuunow Maxamad kusoo biiray dhoor xildhibaan oo horey ugu fikir ahaa Gudoomiyihii Xilka laga qaaday ee Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Xildhibaanadan kasoo baxay Garabka Shariif Xasan oo gaarayay ilaa labo Xildhibaan ayaa maanta waxa ee ka qeyb galeen kulankaa ee Baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka kaa oo looga hadlayay ajandayaal kala duwan.
Sheekh Xuseen oo kamid ahaa Xildhibaanadii taageersanaa Shariif Xasan oo maanta ka hadlay Kulanka Baarlamaanka ayaa sheegay in ee kasoo tageen Garabkaasi kadib markii ee arkeen sida ee wax u socdaan eena go’aansadeen in ee kusoo biiraan Garabka uu Hogaamiyo Madoobe Nuunow Maxamad oo ku taagan sharciga sida uu sheegay.
Waxaa maalmahan Muqdisho si weyn uga socda kala iibsi Xildhibaanada ,waxa eena labada Nin ee isku haya xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka mid waliba uu doonayaan in Xildhibaanada taageeradooda uu helo eena garab istaagaan si uu ugu shir tago.
Shariif Xasan ayaana hada u muuqda mid si tartiib tartiib ah saaxada uga baxaya iyadoo isa soo dhimayaan taageerayaasha uu ku leeyahay Baarlamaanak Soomaaliya oo dhawaan cod aqlabiyad leh ku doortay Madoobe Nuunow Maxamad in uu Gudoomiyo noqdo kadib markii xilkii ka qaadeen Shariif Xasan.
loolanka labada dhinac ayaa ah mid waliba socda ahna faanoole fara kama qoda ,waxaan hada Xarunta Golaha Shcabaka la wareegay oo maalin walba ku shira Xildhibaanada taageersan Gudoomiyaha Cusub Madoobe Nuunow Maxamad.